Global Voices teny Malagasy » Miblaogy mikasika ny Vaovao Farany araka ny fomba Afrikana Tatsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Oktobra 2018 4:01 GMT 1	 · Mpanoratra Bronwyn Nandika imanoela fifaliana
Raha toa ka manakaiky ny Andro Iraisam-pirenena natokana ho an'ny SIDA amin'ny voalohan'ny volana Desambra isika, niteraka resabe iray hafa indray ilay minisitry ny Fahasalamana miteraka adihevitra be sy malaza ratsy ao Afrika Atsimo, i Manto Tshabalala- Msimang. Fantatra izy amin'ny anarana hoe ”Dr.Tongolo Gasy” noho ny fiarovany ny tongolo gasy, ny ranom-boasary ary ny menaka oliva tato ho ato ho toy ny vahaolana ho an'ireo olona mararin'ny SIDA, raha toa ka tokony hanome fanafody manohitra ny firongatry ny viriosy izay tena ilain'izy ireo, lasa resaka mahaliana ireo haino aman-jery izany, miampanga ilay governemanta mpanavakavaka taloha ho tomponandraikitra amin'ilay areti-mifindra VIH/SIDA ao Afrika Atsimo. Manana ilay tantara i Jonty ao amin'ny The Fishbowl :
Toerana fonenana ho anà vondrompiarahamonina Miozolomanina somary maro ihany ary tena mifikitra amin'ny ady eo amin'Israely sy i Paletsina i Afrika Atsimo. Mampiantrano vondrompiarahamonina jiosy izay tena mifikitra be amin'ny ady ao Afovoany Atsinanana ihany koa izy. Lohahevitra rakofana be any amin'ny haino aman-jery any amin'ny gazety afrikana tatsimo ny politikan'ny Afovoany Atsinanana mikasika an'i Israely sy ireo faritra Palestiniana ary matetika koa loahevitra anaty adihevitra mafàna any anatin'ny onjam-peo, toa tsy afaky ny hifankahazo na hahita teboka iombonana ireo vondrona roa ireo. Nahita ny toerany tao amin'ny tontolon'ny blaogy afrikana tatsimo ilay fanontaniana, indrindra niaraka tamin'ny blaogy roa, ny iray manoratra fomba fijery mpomba an'i Israely ary ny iray hafa kosa fomba fijery mpomba an'i Palestina. Tanjon'i Steve ao amin'ny It's Almost Supernatural  ny hanasongadina ny heveriny ho fitongilanan'ireo haino aman-jery ho amin'ireo Palestiniana. Ao amin'ny lahatsoratra nosoratany farany , miblaogy mikasika ny Profesora Solomon Hussein, Afrikana Tatsimo Miozolomanina iray mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay vao haingana no nitsidika ny tao Afovoany Atsinanana, namita iraka fanadihadiana ny zavamisy:
Manasongadina izay toa tsapany fa fikarakarana feno herisetra be ataon'ireo Israeliana an'ireo Palestiniana i Muhammad ao amin'ny “The Front Line” . Manopy maso eo amin'ilay fihetsiketsehana  vao haingana nataon'ireo ankizy Palestianana mpianatra eny an-tsekoly izy:
Farany, manainga fanontaniana mahaliana mikasika ilay antsoina be hoe elitisma Mainty ao Afrika Atsimo i Trudi ao amin'ny The Hope Flower :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/14/127240/
 The Fishbowl: http://jontyfisher.blogspot.com/
 It's Almost Supernatural: http://supernatural.blogs.com/
 lahatsoratra nosoratany farany: http://supernatural.blogs.com/weblog/2005/11/hussein_solomon.html
 The Hope Flower: http://www.trudimakhaya.blogspot.com/